Nkwalite Hanok | Apg29
Chukwu butere ya!
Ebe obu na Hanok jere ije na Chineke,] ghagh was, n'ihi na Chineke wetara ya.
Ihe omume a bu ngosiputa amuma banyere nbughari nke agba ohu. Nkwalite abụghị ihe ọhụụ, mana akọwawara ya n'ụzọ amụma dị na agba ochie. Ma ekpughere nkwalite ya ma buru ụzọ gosipụta ihe nzuzo na agba ohu.
1Kor 15:51. Le, agwa m unu ihe nzuzo: Anyị niile ekwesịghị ịna-ehi ụra, kama anyị niile ga-agbanwe.
Ọ dị mma ịmara na Hanok so Chineke jee ije. Anyị ga-eso Jizọs dị n'otu. Oburu na anyi anatawo Jisos mgbe ahu ka ayi di njikere mgbe O g’ebubata anyi n’ulo.
Ahụghị Hanok, n'ihi na ọ bịara na mberede. N'otu ụzọ ahụ, ndị kwere na Jizọs Kraịst ga-abụ. Na mberede, aga aga ha, ị gaghị ahụ ha, n'ihi na ha na Jizọs Kraịst nọ ugbu a.
Hib 11: 5. Ọ bụ okwukwe ka e ji mee ka Inọk [Hanok] daa ka ọ ghara ịhụ ọnwụ, a hụghịkwa ya ọzọ n'ihi na Chineke butere ya. N’ihi na tutu bulie ya, o nwetawo ihe akaebe na o mere Chineke obi uto.
Inọk (Hanok) kwenyere na Chineke, n’ihi ya kwa ka ewetara ya. Ọ bụrụ n’ikwere na Jizọs ma zọpụta gị, ị ga-ewerekwa otu ụbọchị zute Jizọs na mbara ikuku. A gaghị ahapụ gị.
Otu ihe dị mma ịmara n’aja bụ na tupu Chineke eburu Inọk, na ọ gbara akaebe na ọ masịrị Chukwu. Y’oburu na inata Jisos ma buru onye a zoputara, onwere onye akaebe n’obi gi na ibu nwa Chineke. Àmà a doro anya na uche gị. Eyịghe idụhe. Ọ mara mara na azọpụtara gị ma bụrụ Chukwu.
1 Jn 5: 10-11. Onye obula kwere na Okpara Chineke nwere ihe akaebe n’ime ya. Onye na-ekwenyeghi na Chineke emewo ya onye ugha n’ihi na o kweghi nkwuputa nke Chineke gbara ama banyere Nwa ya. Nka bu kwa ihe-àmà: na Chineke nyere ayi ndu ebighi-ebi, na ndu diri Ọkpara-Ya.
Ka ọ dị ugbu a, Hanok (Inọk) na-echere ka Chineke weghachite ya, ọ nọghị nkịtị, mana ụzọ ndụ gara n'ihu. Ọ mụrụ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Ọ rụrụ ọrụ n’ụwa a wee jeere Chineke ozi site n’iso ya jee.
Agba Ọhụụ kwuru na ha jere ozi dị ndụ mgbe ha na-eche Ọkpara Ya Jizọs Kraịst site n’eluigwe.
1 Tesalonaị 1: 9-10. N’ihi na ha n’onwe anyị na-agwa anyị otu esi nabata anyị na gị, na etu i si jiri arụsị chigharịkwute Chineke, ijere ezi Chineke dị ndụ ozi, na ichere site n’eluigwe Ọkpara ya, Onye O mere ka o si n’ọnwụ bilie, Jizọs. , nke na-azọpụta anyị iwe na-abịanụ.
N’otu aka ahu, anyi ndi kwenyere na Jisos kwesiri idi ike n ’uwa a, ga aru oru, lekọta ezinulo anyi, soro Chineke jee ije ebe anyi na-eche Jisos ka O laa n’ulo anyi.
"Jizọs, nyere m aka ibi ndụ m kwa ụbọchị ma jeere gị ozi ebe m na-eche ka ị kpọbata m n'ụlọ. Amen."
V 04, tisdag 26 januari 2021 kl 12:38